दुनियाँकै मनमा राज गरेकी हेमा मालिनीको घरमा जुम्ल्याहा सन्तानको आगमन
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » दुनियाँकै मनमा राज गरेकी हेमा मालिनीको घरमा जुम्ल्याहा सन्तानको आगमन
काठमाडौं । चर्चित बलिउड हस्तिहरु हेमा मालिनी र धर्मेन्द्रको घरमा फेरि खुशीको समय आएको छ । हेमा मालिनीकी छोरी अहाना देओल आमा बनेकी छिन् । सबैभन्दा खुशीको कुरा यो छ कि अहानाले जुम्ल्याहा छोरीहरूलाई जन्म दिइन् । अहाना आफैंले यो राम्रो समाचार सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेकी छन् ।
अहानाले एक बधाई साझा गरिन्, जसमा उनले हेमा मालिनी र धर्मेन्द्र हजुरबा हजुरआमाका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । अहानाले इन्स्टा स्टोरीमा एउटा बधाई कार्ड जारी गरेकी हुन् । यसमा उनले लेखेकी छिन्, ‘कहिलेकाँही चमत्कारहरू जोडीमा हुन्छन् । हामी यो सूचना दिँदा खुसी छौं कि दुई छोरीहरू एस्ट्रिया र आडिया बोहरा घरमा आएका छन् । २६ नोभेम्बर २०२० मा जन्म भयो ।’
यससँगै अहानाले घरका सबै सदस्यहरूलाई उनीहरू कस्तो महसुस गरिरहेछन् बताइन् । अभिभावक वैभव वोहरा र अहाना गर्व गर्दै छन् । भाइ डायरियन बोहरा जिज्ञासु छन् । हजुरबा हजुरआमा धर्मेन्द्र र हेमा मालिना पनि खुसी छन् ।
यो कठिन समयमा जब कोरोना जताततै देखिएको छ, यो राम्रो खबर देओल परिवारको लागि अमूल्य मानिएको छ । सन् २०१४ मा अहाना देओलले वैभवसँग विवाह गरेकी हुन् । यो विवाह हुनु अघि उनीहरूको एक छोरो डेरियन थियो ।
रिपोर्टका अनुसार अहाना देओल अझै अस्पतालमा छन् । उनलाई अझै डिस्चार्ज गरिएको छैन । कामको बारेमा कुरा गर्दै, अहानाले शुरुको समयमा फिल्महरूमा काम गरिन् तर दर्शकले मन नपराएपछि टाढा भइन् ।
आजका प्रख्यात स्टोरीहरु
१२ बर्ष जेठि मलाइकासँग विवाह र अरुभन्दा के फरक भन्ने प्रश्नमा अर्जुनले दिए रोचक जवाफ
बाथरूममा नुहाउँदा यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने जान सक्छ ज्यान
यसैले सम्मानका साथ भनिन्छ स्टार : यी १६ कलाकारले किनेका छन् आफ्नै निजी जेट विमान
विश्वको सबैभन्दा सुन्दर महिलाको शीर्ष १० सूची प्रकाशित, कुन–कुन देशका छन् ? [ तस्विरसहित ]
मानवतालाई लज्जाबोध पार्ने घटना : दुर्घटनामा गाउँलेहरु उद्धार हैन लाश र घाइतेलाई लुटेर भागे !
अर्को ग्रहका मानिसहरु पृथ्वीमा आएको रहस्य बेलायतमापनि भेटियो, विश्वभरी सन्त्रास !
डिग्री पासपछिको जागिर छोडर गाउँ आएकी दिव्या कृषिबाट कमाउछिन् बार्षिक झण्डै ५० लाख
श्रीमतीसँग रिसाएर हिँडेका श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने जो कोही चकित !
हामी छुट्नै सक्दैनौ भन्दै दिदी–बहिनीले नै भागेर मन्दिरमा विवाह गरेपछि…
सरकारी सेवामा पहिलो, दोस्रोमा नाम निकालेपछि बिहे गरेका जोडीको २ बर्ष नवित्दै सम्बन्धबिच्छेद
विवाहको पार्टीमा रातो धर्कोमा खुलेकी श्वेता [ ५ तस्विर ]
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’बाट किन भइन् आस्था राउत आउट, अब को आउँदैछ ?
गायक सपुतलाई आदर्श सम्मान र थकालीलाई सिर्जनशील पत्रकारिता पुरस्कार
एक छोरीको आमाबाबु बने अनुष्का–विराट
वेब श्रृंखला ‘अनामिका’ मा सनी लियोन जोस
अरुलाई सुधार चाहादा शत्रु भए भन्दै महानायक अमिताभले सारै चित्त दुखाए
२८ वर्षीया अभिनेत्रीले ४ वर्षीय तैमूरसँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि करिनाले के भनिन् ?
अभिनेत्री सन्नी लियोनको नया अवतारले तरंग
सलुनमामा गएको थाहा पाएपछि बेलायत प्रहरीले प्रियंकालाई झिकायो
‘द कपिल शर्मा शो’ मा अभिषेक बच्चनले कोरोना संक्रमणका बेलाको खास खुलासा गरे
निर्देशकले घरमा बोलाएर गरेको त्यो घटना सम्झिदै नोरा फतेही करीनासँग रोइन्
अत्याधिक भाइरल भइरहेको अभिनेत्री अदा शर्माको यो भिडियोमा के छ ?
कपिल शर्मालाई मुम्बई प्रहरीले झिकायो
अभिनेता अमिताभ बच्चनविरुद्ध मुद्दा दायर
सानै उमेरमा अभिनेत्री जान्हवी कपूरले किनिन् आफ्नै घर, पैसा कसरी कमियो भन्ने खुल्यो !